मोबाइलको ब्याट्री सकिँदा जहाँ पायो त्यहाँ चार्ज गरिहाल्नु हुन्छ ? त्यसो हो भने अब सावधान हुनुहोस् - Technology Khabar
» मोबाइलको ब्याट्री सकिँदा जहाँ पायो त्यहाँ चार्ज गरिहाल्नु हुन्छ ? त्यसो हो भने अब सावधान हुनुहोस्
मोबाइल ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदा तपाईं के गर्नुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिले, त्यसलाई चार्ज गर्नको लागि व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ। मोबाइल चार्जिंगका लागि यूएसबी पोर्टहरू खोज्नुहुन्छ। यी पोर्टहरू तपाईँको फोनलाई चार्ज गर्न सजिलैसँग बाथरूम, बस स्टेशन, कुनै सार्वजनिक कार्यालय वा एयरपोर्टहरुमा उपलब्ध हुन्छन्। त्यसपछि तपाईं केहि सोच विचार बिना नै आफ्नो मोबाइल चार्ज गर्न हतार गर्नुहुन्छ।
त्यसोभए, यदि तपाईँ अहिलेसम्म यस्तै काम गर्दै हुनुहुन्छ, भने सावधान रहनुहोस्। किनकि साइबर अपराधीले तपाईंको संवेदनशील डाटा चोरी गर्न सक्दछन्। र तपाईँको एक आँखा झिम्काइमा नै सबैचिज गुम्न सक्दछ।
साइबर अपराधीहरुले चार्जिंग पोर्टसहित बूथहरूमा भाइरसले भरिएका प्रोग्रामहरू इन्स्टल गर्दछन जुन उपभोक्ताको फोन र अन्य उपकरणहरूमा प्रवेश गर्दछ। विज्ञहरूले भन्छन कि तपाईँको जता पनि मोबाइल फोन वा ल्यापटप चार्ज गर्ने बानी धेरै महँगो सावित हुन सक्छ। साइबर क्रिमिनलले तपाईंको बैंक खाता, राहदानी, ठेगाना, व्यक्तिगत जानकारीमा पहुँच पुर्याउन सक्छन। यदि अपराधीहरू मालवेयर स्थापना गर्न सफल भए भने तपाईंको फोन पनि ब्लक गर्न सकिन्छ।
यूएसबी कन्डमको प्रयोग गरेर डाटा चोरी रोक्न सकिन्छ
यदि तपाईं यस जोखिमबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने, बजारमा ‘यूएसबी कन्डम’ को नाममा ‘यूएसबी डाटा ब्लक’ उपलब्ध हुने गर्दछ। तिनीहरू कन्डम जस्तै उपयोगी र लाभदायक हुन्छन्। त्यसले यूएसबीमार्फत डाटा चोरीको जोखिमबाट बचाउँछन्। ‘यूएसबी कन्डम्ज’ इनपुट र आउटपुट पोर्ट सहितका सानो मोबाइल एडेप्टरहरू हुन्छन् र जसले तपाईंको मोबाइल चार्जिंगको बेला डाटा ट्रान्सफरलाई रोक्दछन्।
आईबीएम कम्पनीको साइबर सुरक्षा रिपोर्ट अनुसार ‘भाइरसयुक्त सफ्टवेयरले तपाईँको फोन वा ल्यापटपको कम्प्युटिङ्ग उर्जालाई हाईज्याक गर्दछ। नतिजाको रूपमा तपाईको मोबाइल, ल्यापटप प्रोसेसरको प्रयोग बढ्छ र तपाईको उपकरण सुस्त हुन्छ ।’
फोर्ब्स पत्रिकालाई दिइएको अन्तर्वार्तामा आईबीएमको साइबर सेक्यूरिटी डिभिजनका कालेब बार्लोले बैंकिङ्ग ठगी रोक्न युएसबी कन्डमको प्रयोगमा जोड दिएका थिए।
स्काईपमा कुराकानी गर्नुहुन्छ ? माइक्रोसफ्टका कामदारले सुन्छन तपाईँको व्यक्तिगत कुराकानी
महाभूकम्प पिडितलाई दिए टेलिकम अपरेटरहरुले निशुल्क सेवा
२३ बैशाख २०७२, बुधबार